Ubani empilweni yakhe ayengazizwa ecindezelekile? Mhlawumbe iningi lethu libhekene nale nkinga. Sesaba ukudabuka, ubhedu, ukwesaba okungenangqondo. Futhi ngani? Kunezinhlobo eziningi zezimpendulo: asazi ukuthi senzeni nalo, sesaba ukubonakala sibuthakathaka noma ukususa isisindo somuntu ojabule phakade. Abantu abaningi abazi ukuthi bangabhekana kanjani nokucindezeleka ekhaya. Kodwa ukucindezeleka kungaba isikhuthazo sokushintsha impilo yakho ibe ngcono.
Uma kudabuka ukudabuka emnyango wethu, sesaba ukuyivula, ngoba emva kwalokho iyodonsela futhi ihawukele, futhi ilahle ithemba, futhi ingathembi. Kodwa lokhu konke akunamandla futhi udonga lusizi. Ngokwamukela ngendlela enobungane, uzoqonda ukuthi intukuthelo ingaba kanjani amandla, ngakho usizi lungathuthukisa isihe nokuthobeka. Futhi lokhu, kuyoholela ekukhuleni okungokomoya. Akufanele ukuxosha isivakashi esingamukelwa, lalela izeluleko zabangane, ukuze ususe lesi simo ngokushesha. Qonda, ukucindezeleka akuzange kwenzeke kanjalo, izimo zaletha. Futhi kaningi, ukulahlekelwa, into enhle ishiye impilo yakho, futhi akukho okubonakalayo kunalokho. Siqala ukuzizwa silahliwe futhi singenalutho empilweni. Sibona izinhlangothi ezimbi kuphela futhi asiqapheli okuhle. Futhi nakakhulu ngakho-ke awuqapheli lokho ukuthi yedwa ngokucindezeleka esikude, esikhundleni sokuphila okwamanje.
Ukuze uqale ukusebenza nokucindezeleka, kubalulekile ukwamukela iqiniso lokuthi ukuhlupheka nosizi kwenzeka emphefumulweni wethu ngamunye. Kodwa bayahamba, futhi ukudabuka kungasala. Khona-ke sekuyisikhathi sokuzibuza: yini oyiphutha ngesikhathi sokuzwa ugcwele impilo. Lapho siqala ukulalela thina, kulula ukuba siqonde ubuhlobo bethu nezwe.
Vumela uzizwe udabukile. Zama ukuqonda ukuthi iyiphi ingxenye yomzimba, ukuqondisa khona ukuphefumula nokuphefumula. Thatha zonke izikhathi nezithombe eziza engqondweni yakho, bese ubuyela empeleni. Ngokungangabazeki, kuzodinga amandla nesibindi, ngoba ukubheka amehlo okudabuka akulula. Kufanele uzizwe njengomuntu obuka ngaphandle ongayilahli le mizwelo, ayihambisani, kodwa nje ukhona nabo. Ungazizwa unecala, vumela ukuthi ukhale, ushise, kodwa ngokucophelela nangomusa. Akekho ozosekela umphefumulo wakho olimele njengakho. Kusukela kule ndawo kuya kuwe, konke kuzoshintsha ngokushesha. Mayelana nalokho okwenzekile, ungathula futhi uhlekise ngokuthula. Njengoba kushiwo ngenhla, ukucindezeleka ngalunye kuqukethe umyalezo ngokwawo. Futhi okuhlangenwe nakho okunjalo kuyadingeka ukuthi sifunde ukuxoshwa nokuzimela. Ukuvusa ubuchopho kuzokuletha ukuqonda ukuthi awusona isisulu salesizwe.
Ukubhekana nokucindezeleka akulula. Ikakhulukazi kakhulu, ekhaya. Yiqiniso, ukucindezeleka ngakwesinye isandla kuyisenzo esivamile esimweni esithile esingathandeki empilweni yakho. Kodwa ngakolunye uhlangothi - kungumgwaqo wokuxubha, ongawuvumeli ukuhamba. Isibonelo, uhlehlile nomthandi wakho. Ubhekene nentukuthelo, ukuzihawukela, isizungu. Futhi, hhayi nje ngesisekelo sezenzakalo zangempela, kodwa futhi nasezindabeni zokuziqhenya. Futhi yilokho okwenza i-spleen ihambe nathi emlenzeni. Yebo, kunzima ukuvala ukucabanga kwakho, kodwa kudingeka wenze lokhu uma ungafuni ukuhamba ngokuphila ngokufaka "Angidingi noma ubani". Ukucindezeleka kanye nezimo ezihambisana nayo kuyisiteji okufanele sidluliselwe ngenhliziyo evulekile. Vuka ukubonga impilo ngalokho okulungile empilweni yakho. Thola imigomo, uhlose kubo, futhi ungahlali esikhathini esidlule. Ake sinikeze iseluleko esiwusizo kubanokusebenza kwengqondo ukuthi bangabhekana kanjani nokucindezeleka ekhaya:
• Kungenziwa ngaphandle kobunzima obukhulu, ukuyeka ukugqoka izingubo zobumnyama. Uma ungenayo izinto eziqhakazile, ungaba nobuvila ukuhamba uthenge. Kuyasiza ngempela. Eminye imithi kunomkhakha wonke obizwa ngokuthi ukwelashwa kombala. Ungakholelwa ukuthi imibala ekhanyayo ingajabula, bese ubukela abangani bakho, yiziphi izinto abazenzayo ngokuya ngokomzwelo wakho. Uma ukholwa, ke uqondise ngokuphepha "i-oda" ekhaya. Hamba amakhethini akhanyayo, yenza ama-accents amaningi ombala ngaphakathi, faka iphosta yokuqinisekisa impilo.
• Vumela impilo yakho ibe lula kakhulu, hamba emgwaqweni ngezinsuku ezishisayo, bheka umlilo. Ayikho indawo yomlilo, ungakwazi ukukhanyisa ikhandlela.
• Hamba ujikeleza umuzi. Ungenza ukudansa noma ukugijima. Njengengathi ngeke kube efiselekayo ukushiya indlu, kodwa, ngokwesibonelo, ukudansa kuwe kuzokusiza ngisho nesikhashana ukushiya imicabango engathandeki. Ngemuva kwakho konke, uzocabangela kuphela ukunyakaza nomculo.
• Shayela labo abangazange bazwe isikhathi eside. Kuhle nakakhulu, yenza isikhathi sokuqokwa. Xhumana nabangani, abantu abaseduze - akukho okunye okunye akusizi ukubhekana nemizwa emibi.
• Cabanga ngento ethile yokuzilibazisa oye wathanda ukuyenza-mhlawumbe ukudweba, noma ukugqoka, noma ngisho nokuqhuba izifundo.
Lezi zinto ezilula, ezibonakalayo, zizoletha into enhle, engakaze ifike ngaphambi kokususa ukucindezeleka. Khumbula nje ukuthi izenzo zakho nezinqumo kufanele kukulethe injabulo.
Indlela yokwakha ubuhlobo nendodakazi emthethweni
Indlela yokubhekana nesimo sengqondo esibi
Ngombukiso wesiboniso u-Yudashkin Anna Semenovich walahlekelwa ingubo ye-mink
U-Oleg Yakovlev wangcwatshwa izinsuku ezingu-39 ngemuva kokufa kwakhe
Utshani kuleli zwe ngezandla zabo
I-"Olivier" isaladi enenkukhu ehlutshiwe
Ngezimfanelo kanye nokuhlaselwa kwekhofi elimnandi
Ungakhetha kanjani umswakama obomvu obomvu?
I-Coma ne-degrees zayo, izizathu zokuvela kwayo